Dowladda Kenya oo shaacisay magacyada dadkii fududeeyay weerarkii jaamacadda Gaarisa – Radio Muqdisho
Sa laga soo xigtay wakaaladaha wararka Dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada shaqsiyaad loo heysto ineey fududeeyeen ama ku lug lahaayeen weerarkii jaamacadda Gaarisa lagu qaaday khamiistii la soo dhaafay.
Hey’adaha amnige ee dalkaasi ayaa sheegay in falkaasi loo qabtay dad gaaraya ilaa 15 qofood, kuwaasoo lala xiriirinayo iney fududeeyeen weerarkii Jaamacadda Gaariisa.
Dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira mid ka mid ah waardiyayaashii jaamacadda, milkiilaha hoteelkii ay seexdeen ragga weerarka fuliyay iyo rag kale oo la sheegay in ay usoo gudbiyeen hubkii ay ardayda ku laayeen.
Mgacyada dadka la qabtay ayaa waxaa ka mid ah.
Maxamed Aadan Suuroow oo la sheegay in uu yahay milkiilaha hotelki ay ku soo degeen ragga weerarka fuliyay.
Cismaan Cabdi Dhaqane oo ah waardiyihii jaamacadda kaasoo la sheegay in uu sawirro ka qaaday meydadka ardayda la xasuuqay, isagoo wacay lambaro Soomaaliya ah sida ay booliisku tilmaameen.
Maxamed Abid Abuukar, Xasan Aadan Xasan iyo Sahal Diiriye Xasan ayaa la sheegay iney hubka usoo gudbiyeen maleeshiyaadka gumaadka geystay waxaana la qabtay xadka iyagoo isku dayaya ineey u gudbaan Soomaaliya.
Raggan la qabtay ayaa weli waxaa ku socda baaritaano dheeraad ah.
Deg deg Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Dhuusamareeb